निर्वाचन आयोगमा भ्रष्टाचारः टीभीदेखि उपचारखर्चसम्म निर्वाचन आयोगमा भ्रष्टाचारः टीभीदेखि उपचारखर्चसम्म
आफ्नै घरमा बस्ने, आयोगबाट भाडा उठाउने ! १८ फागुन, काठमाडौं । भनिन्छ, नेपाल ‘सतीले सरापेको देश’ हो । चुनाव हुन नसकेर देशमा छटपटी छ । उता निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको धन्दा चाँहि अर्कै छ । यस्तो नेतृत्वले अब देशमा तीनवटा चुनाव कसरी पार लगाउला ? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ ।
Lumbini Media - Nepali News and Entertainment Portal, Daily Nepali News Updates From Lumbini, Nepal: निर्वाचन आयोगमा भ्रष्टाचारः टीभीदेखि उपचारखर्चसम्म